तपाईंले किन सामुराई चम्प्लु हेर्नु पर्छ - पालना दृश्य
समुराई चम्प्लू समीक्षा
एनिमे के यो लायक हेरिरहेको छ? हेर्नै पर्ने
by Dima XNUM Xth 11 29th नोभेम्बर 2021
2 टिप्पणिहरु किन तपाइँ सामुराई चैम्पलो हेर्नु पर्छ
त्यहाँ धेरै भएको छैन एनिमे मेरो माथि एनिमे सामुराई चम्प्लुको वास्तविक रूपमा बाहिर खडा भएको यात्रा हेर्दै। शृ very्खलाले मलाई धेरै आश्चर्यचकित गर्यो किनकि म ईमानदारीको साथ शीर्षकबाट धेरै आशा गर्दिनथें। एक पटक तपाईले पहिलो एपिसोड शुरू गरेपछि के स्पष्ट हुन्छ, समुराई चम्प्लू तपाईलाई लाग्ने जस्तो लाग्छ त्यस्तो छैन। २०० 2004 मा मात्र आनिमेसको लागि, म यो भन्न सक्दछु कि यो आफ्नो समय भन्दा फरक छ र लेखनको गुणस्तर, पात्रहरू, कथा, सेटिंग्स र शोका अन्य पक्षहरूले मेरो कुरा स्पष्टसँग ठोस बनाउँछन्।
फुउ "योजना" पढ्छन् - समुराई चैम्प्लू
कथा धेरै रोचक छ र पछि एपिसोड सम्म ताजा रहन प्रबन्ध। पात्रहरूको कास्ट राम्रो छ, हामीसँग main मुख्य चरित्रहरू छन् जो म पछि आउँछु र सहायक सब क्यारेक्टरहरूको ठूलो संग्रह जो यो मेरो हेराईको समयमा धेरै यादगार थियो। एनिमे श्रृंखला।
समुराई चम्प्लू जापानी इतिहासको वैकल्पिक अवधिमा सेट गरिएको छ अधिक महत्त्वपूर्ण रूपमा ईडो-युग (१–०–-१–1603) र people व्यक्तिको कथा अनुसरण गर्दछ, जसमध्ये दुई जना छन् सामुराई अनि अर्की एउटी केटी। फुयू भनेर चिनिने युवती शहरको चिया पसलमा काम गर्छिन् जब उनी स्थानीय मजिस्ट्रेटको छोरासँग भेट हुन्छन् जसले उनको र चिया पसल चलाउने परिवारलाई धम्काउन थाल्छ (उनको मालिक)।
मुगेन र जिन उनीहरूको मृत्युको प्रतीक्षा गर्दै छन् - समुराई चम्प्लू
भाग्यवस उनी द्वारा मुक्ति छ मुगेन & Jinदुई सामुराई जो पसलमा छुट्टै प्रवेश गर्छन् र जो एक अर्कासँग सम्बद्ध छैनन्। यस पछि तिनीहरू सबै पसलबाट भाग्न आए जुन एक जना मान्छे पछि उसको शरीर जलायो (जसको पाखुरा काटिएको थियो) जसलाई हामीले पहिले आगोमा जलेको देख्यौं। तिनीहरू कहाँ जाने र कुनै पैसा छैन भन्ने महसुस गरेर3एक रहस्यमय व्यक्तित्वको खोजीमा सम्मिलित हुन्छ जुन "सूर्यमुखी समुराi"साँचो को हो भन्ने थाहा छैन।
भनिए कि सुरुमा कथन थोरै बोरिंग र असहज देखिन्छ, तर यो रोमांच र परिस्थितिहरू हुन् जुन पात्रहरू हेर्ने रमाईलो हुन्छन्, सम्पूर्ण लोड समस्यामा पर्दछन् र प्रायः उद्देश्यमा होइनन्। त्यहाँ विभिन्न एपिसोडहरू छन् जहाँ हाम्रो त्रिकहरू आफैंले कठिन परिस्थितिहरूमा प्रवेश गर्छन्। म यसलाई बिगार्दिन तर हाम्रो main मुख्य पात्रहरू मध्ये एक अपहरण हुन्छ र host पटक भन्दा बढी बन्धक बनाइन्छ!
समुराई चम्प्लूमा हाम्रा मुख्य पात्रहरू धेरै सम्झनागार थिए र मलाई ती सबै मनपर्‍यो। आवाज पात्रहरूले सबै पात्रहरूमा राम्रो राम्रो काम गर्‍यो र म यसका लागि खुसी छु। उनीहरूले भूमिका राम्रोसँग फिट गर्दछन र मलाई लाग्छ उनीहरू आज अझ राम्रो गर्न सक्थे।
पहिले हामीसँग केटी छ, जसलाई चिनिन्छ फू. फू जवान छ, १ 15-१-16 को आसपासमा एनिमे मध्यम लम्बाई खैरो कपालको साथ उनी सामान्यतया लगाउँछिन्। उनी पनि आफ्ना साथीहरू जस्तै गुलाबी पारम्परिक जापानी स्टाइल किमोनो लगाउँछिन् Jin र मुगेन.
Fuu प्रकारको बीचको बफरको रूपमा कार्य गर्दछ मुगेन & जिन, तिनीहरूलाई एनिमेमा धेरै पटक मार्ने रोक्दै। उनी दयालु र समानुभूतिशील छन्, दुवै जिन र मुगेन र एनिममा अन्य पात्रहरू।
अर्को हो मुगेन, को हामी पहिलो एपिसोड मा भेट्छौं एनिमे, एक हिंसात्मक परिचय मा जब उहाँ फू र जिन संग चिया पसल बाहिर आफ्नो लडाई लड्न। मुगेन डर छ कि एक प्रभावी तलवारवाला हो र एक पटक मा धेरै शत्रुहरु लाई आफ्नो संग लिन सक्छ Katana.
ऊ मा एक चोरीको रूपमा देखा छ एनिमे र उनको जंगली उपस्थिति हाम्रो दिमागमा यो सिमेन्ट गर्दछ। उसको आँखाको डरलाग्दो भ्वाइस जोडीको साथ गडबडी अप्रसन्न कपाल छ। उसको रुखो रुचि छ र मेरो मनपर्ने चरित्र होइन तर मलाई उसको लेख्ने तरिका मन पर्छ, किनकि उनी यस भन्दा फरक छन Jin धेरै जसो तिनीहरू सबै समय झगडा गर्छन्।
अन्तमा हामीसँग जिन छ जसलाई हामी एनिमीको पहिलो एपिसोडमा पनि भेट्छौं। जिन मुगेनसँग धेरै फरक छन् र दुईले श्रृंखलामा धेरै फरक क्यारेक्टरहरू चित्रण गर्छन्। मलाई यी दुई बीचको गतिशीलता मन पर्छ र मलाई यो तथ्य मनपर्छ कि फुउले सधैं तिनीहरूलाई तोडिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ तर्कको आवाज हुन्छ।
जिन अग्लो र सुन्दर छ, उसको लामो कालो कपाल छ जसलाई उसले धेरैजसो समय र चश्मा पनि बाँधेको छ। उहाँ शान्त र सङ्कलन गर्नुहुन्छ र प्रायः आफैलाई आफैंमा राख्नुहुन्छ। फुउले आफ्नो डेयरीमा यसको एउटा बिन्दु बनाउँछ, जुन म पछि आउनेछु।
यसमा उप-पात्रहरू समुराई चम्प्लू महान थिए र म धेरै ती सबै मन परायो। तिनीहरू सबै धेरै सम्झनादार थिए र तिनीहरूले एपिसोडहरू हेर्न धेरै रमाईलो बनाए। नर्डिक-वाइकिंग शैलीको मान्छे एकदम हास्यास्पद थियो र मलाई कथा मनपर्‍यो जहाँ आकर्षक महिला जसले लोभ्याउँदछन् Jin र मुगेन त्यसपछि एक बदमाश बाहिर जान्छ।
अविस्मरणीय सब पात्रहरू - समुराई चैम्पलो
एउटा कुरा भन्न को लागी तिनीहरू सबै साँचो र अद्वितीय महसुस गरे। एनिमेसनहरू पनि तिनीहरू मध्ये धेरैको लागि एकदम विस्तृत थियो त्यसैले तिनीहरूलाई अभ्यस्त हुन सजिलो थियो। आवाज कलाकारहरूले सबैलाई एकै साथ ल्याउनको लागि निश्चित कामका लागि उत्कृष्ट काम गरे।
समुराई चैम्पलो हेर्नका लागि कारणहरू
मुगेन र जिनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाईयो - समुराई चम्प्लू
रूपरेखा सामुराई चम्प्लूको रचनात्मकता
अब तपाईंले स्पष्ट आफैंलाई महसुस गर्नु अघि म संक्षिप्तमा भन्न सक्छु कि कथनको तरिका समुराई चम्प्लू हामीलाई प्रस्तुत छ कम भन्दा कम भन्न धेरै रचनात्मक छ। यसको उदाहरण उदाहरणका लागि सिर्जनाकर्ताहरू दृश्यबाट दृश्यमा परिवर्तन हुनेछन् र उपकरणहरूले यसलाई गर्नका लागि प्रयोग गर्छन्। कहिलेकाँही ती आँखा समात्ने ट्रान्जिसनहरू जस्तै मोर्फ कट्स र मास्कहरू प्रयोग गर्दछन् तर कहिलेकाहिँ तिनीहरू केवल कालो हुन जान्छन् वा कालो कटवेहरू प्रयोग गर्दछन्।
यसको समयको लागि अद्भुत एनिमेसन
एनिमेसन शैली र को समाप्त उत्पाद समुराई चम्प्लू एक मात्र उपलब्धि हो। एउटा श्रृंखलाको लागि जुन २०० 2005 मा फिर्ता आयो म भन्छु कि यो मोर्चाको समय भन्दा धेरै अगाडि छ। निश्चित त्यहाँ त्यस्तै अन्य तत्वहरू सहित अन्य एनिमेहरू थिए समुराई चम्प्लू तर मलाई लाग्छ कि एनिमको लागि मैले धेरै कुरा देखेको छैन, यदि मानिसहरूले यसको यस पक्षलाई उल्लेख गरेन भने यसले मलाई अचम्म मान्नेछ किनकि यसले शृङ्खलालाई मात्रै असुरक्षा गरिरहेको छ।
मुगेन र जिनले फू - समुराई चम्प्लूमा आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गरे
एनिममा धेरै दृश्यहरू छन् जसले मलाई स्तब्ध बनायो, हो कि तिनीहरू कत्ति राम्रो थिए भनेर छक्क परे। तिनीहरूले मलाई मेरो टाउको खन्याएर छोडे कि कसरी मैले यो एनिम चाँडो फेला पारेन। म धेरै भन्न चाहन्न तर त्यहाँ एक साइकेडेलिक दृश्य छ जहाँ साइकेडेलिक बोटबिरुवाको भारमा आगो लगाइन्छ र सबै पात्रहरू मूल रूपमा बाहिर निस्कन र हाँस्न थाल्छन्।
शानदार आवाज अभिनय
आवाज कलाकारहरूले वास्तवमा पात्रहरू भित्र्याउँदछन् समुराई चम्प्लू जीवन र उनीहरूले लेखेको तरिकाले आवाज कलाकारहरूलाई श्रृंखलामा संवादको फाइदा लिनको लागि अनुमति दिन्छ। मुगेन र फू जीनको नरम र रिजर्भ भएको बेलामा धेरै बढि बढाइएको आवाजहरू छन्। यी आवाजहरूले मेरो विचारमा तिनीहरूका क्यारेक्टरहरू सहीसँग मेल खान्छन्।
Mugen & Jin spiked - समुराई चैम्पलो
तपाईं जे पनि भए पनि यस कास्टसँग बोर हुनुहुने छैन र तिनीहरूले बनाउनेछन् एनिमे धेरै रमाईलो र हेर्नको लागि सजिलो, त्यहाँ main मुख्य पात्रहरूलाई विचार गर्दै। त्यहाँ केही समय र पुन: देखा पर्ने पात्रहरू छन् जससँग ठूलो आवाज छ जस्तो कि गुप्त पुलिस नेता जसले उद्धारमा मद्दत गर्दछ फू पहिलेका एपिसोडहरूमा।
नदी जस्तै बग्छ
को गति समुराई चम्प्लू धेरै राम्रो क्युरेट गरिएको छ र मलाई यो बग्ने तरीकाले मनपर्दछ। यो नदीसँग मिल्दोजुल्दो छ, त्यसैले शीर्षक। जे भए पनि, जसरी बाटो एनिमे संरचित छ र प्रत्येक एपिसोडको अन्त्यको मतलब भनेको यो एकदम राम्रोसँग मिल्छ। यस श्रृंखलाको बीचमा एक एपिसोड छ जहाँ हामी पछिल्ला एपिसोडहरूमा सबै घटनाहरू पार गर्छौं जुन themselves आफैले प्राप्त गरेका छन्। एपिसोडमा यो एक धेरै आकर्षक र रचनात्मक तरिकामा प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ हामी सबै घटनाहरू पहिले देख्छौं फ्युको डायरी मार्फत।
फू ओकुरुमा समाहित हुन्छ - समुराई चम्प्लू
मुगेन & Jin चोर्नुहोस् जब उनी नुहाईरहेकी छिन् र यसमा पढ्नुहोस्। अब सबै निर्देशकहरूले यसको लागि के गरे होलान अघिल्लो एपिसोडमा भएका सबै घटनाहरूको एक साधारण मोन्टेज प्रदर्शन गर्नु एक प्रकारको रिक्याप एपिसोडको रूपमा, जुन अनिवार्य रूपमा जे हुन्छ त्यो हो।
जे होस्, मँ यी एपिसोडहरूको बारेमा जे ठिक ठान्छु त्यो प्रस्तुतिको तरीका हो। घटनाहरू पढ्नको लागि छनौट गर्दै (राम्रोसँग मुगेन पढ्न सक्दैनन्) मुगेन र जिनले र यसले हामीलाई वास्तवमै एक अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ कि उनीहरूले उनीहरूको आफ्नो कार्यहरूमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् जब उनीहरूलाई POV बाट उनीहरूमा फिर्ता पठाइन्छ। फू। उनीले पछिल्ला सम्पूर्ण घटनाहरूको अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छिन् र हामी यी सबै घटनाहरू देख्छौं यद्यपि उनको दर्शनमा। यो मलाई मनपर्ने कुरा हो।
पवित्र बोटमा आगो लागेको छ - समुराई चम्प्लू
यी सबै घटनाहरू हेर्न यो एक धेरै रचनात्मक र उत्तम तरिका हो र मलाई मन पर्‍यो कि यो एकल चरित्रको परिप्रेक्ष्यमा हो किनकि यो एकदम स्फूर्तिदायी छ। अन्य धेरै उत्पादकहरूले यसको चिन्ता लिने थिएनन् तर मलाई लाग्दछ कि यी सबै महत्वपूर्ण घटनाहरू पार गर्नु यो एक उत्तम तरिका हो जबकि यसलाई अझै रमाईलो र मजाको बनाउँदैछ।
आवाज ट्र्याक इन समुराई चम्प्लू विशेष ध्यान दिईन्छ किनकि तिनीहरूको यो कार्य-साहसिक एनिम श्रृंखलाको लागि तपाईं आशा गर्नुहुन्न। त्यहाँ धेरै हिप-हप शैली संगीत धडकन छन् तर केही भावनात्मक पनि छन् र यी ट्र्याकहरू लगभग यस्तो लाग्छ कि मलाई श्रृ the्खलाको रूपमा हिप-हप स्टाइल बीट्सको रूपमा थाहा छ किनकि मसँग धेरै परिचित छन्। तिनीहरू धेरै गम्भीर देखिदैनन् तर उनीहरू निश्चित रूपमा ठाउँ बाट बाहिर महसुस गर्दैनन्।
कार्यान्वयन अगाडि ल्याइएको छ - समुराई चम्प्लू
भित्रको संवाद समुराई चम्प्लू महान छ र यसले तपाइँको औंलाहरूमा तपाइँलाई राख्छ। मुख्यतया main मुख्य चरित्र बीचको रसायन विज्ञान एक कारण यो यो यति राम्रो काम गर्दछ तर यो पनि यो जसरी लेखिएको छ। श्रृ in्खलाको धेरै जसो वर्णहरू बीचको कुराकानी यस्तै देखिन्छ। राम्रो ... .. वास्तविक, यसको मतलव तपाईले रमाईलो गर्न सक्नुहुनेछ र अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले सुन्नुहुने धेरै धेरै संवादहरुलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ।
फुयूले म्यूगेनलाई मद्दतको लागि सोधे - सामराई चम्प्लू
२०० 2004 मा मa्गाबाट फिर्ता पाउँदा पनि यो अझ राम्रो र राम्रोसँग लेखिएको छ, यो मden्गाबाट गाढा र अनुकूलित भए पनि। त्यहाँ केहि साँच्चिकै महान र अविस्मरणीय लडाई दृश्यहरू छन् जुन धेरै हास्यास्पद छ र संवादको लामो अंशहरू समावेश गर्दछ जुन शोको पछाडि लेखनको लागि अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।
एनिमेसन शैली केहि अद्भुत छैन तर त्यहाँ केहि राम्रा पलहरू छन् जहाँ हामी वास्तवमा श्रृंखलाको एनिमेटरहरूको कलात्मक प्रतिभा हेर्न पाउँछौं। त्यहाँ केहि ल्याण्डस्केपको ब्याकड्रपहरू वास्तवमै राम्रा हातले खिचेका छन् र यो धेरै आँखा लाग्ने छ। तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ कि धेरै कामहरू श्रृंखलाहरू सिर्जना गर्न गएको छ र सेटिंग्सले हामीले पात्रहरू देख्छौं।
इन मा आगमन - समुराई चैम्पलो
मेरो मतलब भनेको यो हो कि यस कार्यक्रमले कति अद्भुत देखिन्छ र त्यसमा ध्यान दिएर हेर्नु एक चीज हो (२०० 2004) अन्त्य हुने क्रेडिटहरू हुन्। अधिकांश एपिसोडहरूको लागि MINMI द्वारा मूल समाप्ति गीत "शिकी नो Uta" कलाकृतिको मोन्टगेजमा प्ले गर्दछ। गीत धेरै यादगार छ र वास्तवमै मसँग टाँसिएको छ। मँ अहिले पनि मेरो टाउकोमा सुन्न सक्दछु र यो एकदम मीठो गीत हो, सुन्दर गायन र अविस्मरणीय कोरसको साथ।
जिन, मुगेन र फुको साहसिक कार्यहरूको अन्त्य गर्न यो वास्तवमै एक सानो सानो ट्र्याक हो र वास्तवमै यस्तो प्रकारको तपाईंलाई थाहा दिन्छ कि श्रृंखला यत्तिको गम्भीर छैन जस्तो देखिन्छ र अन्तमा प्रदर्शन हुने कलाकृतिहरूको तपाईंलाई साँच्चै प्रशंसा गर्न दिन्छ। तपाईं यसलाई तल एक नजर लिन सक्नुहुन्छ:
समुराई चैम्पलो - समाप्ति थिम - शिकी नो यूटा
महान विकासशील कथा
कथा भनेको त्यस्तो चीज हो जुन वास्तवमै एनिमेको पहिलो चरणहरूमा निर्माण गरिएको थिएन र यसले प्रश्नको लागि धेरै खुला छोड्दछ जुन एक तरिकामा राम्रो छ किनकि यसले दर्शकलाई जहिले पनि प्रश्नहरू सोध्छ र अझ बढी खोजी गर्दछ। हामी पछि श्रृंखलाको कथामा अधिक र अधिक स see्केतहरू हेर्न थाल्छौं। सबै मा यो अनुसरण गर्न धेरै सजिलो छ र यो वास्तवमा यी भागहरू छैन एनिमे त्यो सब भन्दा सान्दर्भिक हो तर सानो एस्केड्स उनीहरू आफैंमा जान्छन् कि हेर्नका लागि सबैभन्दा रमाईलो छ।
सामान्य प्रतिक्रिया समुराई चम्प्लू फोरममा र अनलाइन छलफलमा दुबै सदमेको छ। धेरै व्यक्ति धेरै आश्चर्यचकित देखिन्छन् कि उनीहरू यो एनिममा भन्दा छिटो आएनन्। पहिलो सीजनको रूपमा देखिएको कालो लगून मँ भन्छु, एक बर्ष पछि प्रसारण हुन्छ समुराई चम्प्लू यसको समयको लागि धेरै राम्रो गर्यो।
केहि एनिमे मैले यो एनिमे हेर्दै यात्रा महसुस गरेको छु, मेरो रायमा, अपूर्ण उत्पादनहरू र विचारहरू जस्तै। मिश्रित रचनाको आदर्शहरू जुन उनीहरू अनुकूलन गरिरहेका थिए। तर समुराई चम्प्लूको साथ तपाईले त्यस्तो प्रभाव पाउनु हुने छैन। यो लगभग एक फिल्म जस्तै महसुस गर्दछ। यो यो समय भन्दा अगाडि नै हो र हामी केवल दोस्रो सत्रको सपना देख्न सक्छौं, यसै बीच, नेटफ्लिक्स भनेको Green बीजको अर्को सीजन ग्रीन लाइटिंग हो। त्यहाँ अर्को वास्तविकता हुन सक्छ जहाँ Se बीजहरू मात्र मौसममा र समुराई चम्प्लूले 7. पाइए। एक मानिस कसरी सपना देख्न सक्छ।
मुगेन र जिनले आफ्नो भाग्य स्वीकार्छन् - समुराई चम्प्लू
मलाई लाग्दैन समुराई चम्प्लू सबैका लागि हुने छ र म त्यो बुझ्छु। जे होस्, यदि तपाईं दिनुहोस् समुराई चम्प्लू एक शट म प्रतिज्ञा गर्छु तपाईं पछुताउनु हुँदैन। योसँग उत्कृष्ट कथा, रमाईलो पात्रहरू छन् जुन मनपर्न र सहानुभूति दिन धेरै सजिलो छ, एक ध्वनि तपाईं यसलाई नेटफ्लिक्समा हेर्न सक्नुहुनेछ: https://www.netflix.com/browse?jbv=70213065
पढ्न को लागी धन्यवाद, एक महान दिन र सुरक्षित रहनुहोस्!
व्यापार खरीद द्वारा साइटलाई मद्दत गर्नुहोस्:
Pingback:5हप्ता 2021 बाट 24 मनपर्ने एनिम ब्लग पोष्टहरू | एनिमीको कागको संसार
हामीलाई फिचर गर्नु भएकोमा धन्यवाद।
अघिल्लो प्रविष्टि मलाई मिस नगाटोरोसँग नराख्नुहोस् - सीजन २ प्रीमियर मिति + अवलोकन र विचारहरू
अर्को प्रविष्टि शीर्ष १० रोमान्स एनिमे क्रन्ची रोलमा हेर्न